Usuku lweGroundhog: yintoni, xa ibhiyozelwa kunye nokubaluleka kwayo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 04/05/2022 12:00 | Izaziso
Ukuza kuthi ga namhlanje, sonke siyazi ngakumbi okanye ngaphantsi malunga nabadumileyo Usuku lwegroundhog. Kwiimeko ezininzi, oku mhlawumbi kungenxa yefilimu kaBill Murray ethi Stuck in Time. Nangona isisiganeko esidumileyo eUnited States, lo msitho uye wawela imida. Sinako ukonwabela uqikelelo lukaGroundhog Phil kwiindaba zanamhlanje zaseYurophu. Le yenye yezona zithethe zinomdla kwaye kudala zilindelwe eMelika.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuze sikuxelele yonke into ekufuneka uyazi malunga noSuku lweGroundhog kunye nokubaluleka kwayo.
1 Usuku lwegroundhog
2 Lunini uSuku lweGroundhog
3 ibhiyozelwa phi
4 usuku lwe-canadian groundhog
5 Usuku lweGroundhog ePenxutonne, ePennsylvania
Esi sisithethe esinomdla senkcubeko yaseMelika. Ukuqonda uSuku lweGroundhog kunye nokuba lithetha ukuthini, kufuneka sibuyele umva ngexesha. Enyanisweni, imvelaphi yayo ifumaneka EYurophu, ngakumbi eCandelaria. Ebudeni balo mthendeleko, kukho isithethe sonqulo apho abefundisi basasaza amakhandlela.
Ngeli xesha kwakusithiwa ukuba isibhakabhaka sicacile ngokusa, ubusika buya kuba bude. Esi siko sadluliselwa kumaJamani, ongezelela ukuba ukuba ilanga liphezulu, nayiphi na i-hedgehog inokubona isithunzi sayo. Ekugqibeleni, isithethe sanwenwela eMelika. Malunga no-1887, abalimi base-US kwakufuneka baqikelele ukuba buza kuphela nini ubusika ukuze bazi ukuba mabenze ntoni ngezityalo zabo, kwaye basiqhelanisa nesi siko ngokusitshintsha kancinane.
Ukwenza oku kuqikelelwa, bagqiba ekubeni baxhomekeke ekuziphatheni kwezilwanyana. Ngaloo ndlela i-groundhog yaba yireferensi yakhe ephambili. Bayiqwalasela indlela eyayiziphethe ngayo emva kokuba iphumle baza bamisela ukuphela kobusika ngokusekelwe kuyo. (UMdlalo weZihlalo zobukhosi abantu banokuwuqonda...)
Kukholelwa kakhulu ukuba xa ihagu liphuma emhadini, liphendula ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Ukuba ayinakusibona isithunzi sayo kuba inamafu, iya kuwushiya umngxuma wayo kwaye kungekudala ibe sebusika. Nangona kunjalo, ukuba kunelanga, ihagu liya kusibona isithunzi sayo lize libuye lizifihle emhadini. Indlela yesibini ithetha ukuba kusafuneka silinde iiveki ezintandathu ukuze ubusika buphele.
Nangona kunjalo, ngenxa yefilimu yeBill Murray ekhankanywe ngasentla, uSuku lweGroundhog lwathatha enye intsingiselo. Kule movie, i-protagonist ihlala inamathele ngosuku olufanayo. Kungenxa yoko le nto, kwabaninzi, usuku lunxulunyaniswa nokwenza into enye imihla ngemihla ngendlela esebenza ngoomatshini okanye ekruqulayo.
Lunini uSuku lweGroundhog
Esi siko sibhiyozelwa kulo lonke elaseUnited States naseKhanada, nangona idume kakhulu ePunxsutawney. Kukho ihagu elidumileyo elihlala phantsi, uPhil. Sisilwanyana esithandwa kakhulu kwaye minyaka le bayasikhupha emhadini waso ukujonga ukuziphatha kwaso. Uyazibuza ukuba lunini usuku lweGroundhog? Olu suku luphawula malunga nesiqingatha phakathi kwe-solstice yasebusika kunye ne-equinox yasentwasahlobo. Ngoko ke, Olu suku lubhiyozelwa nge-2 kaFebruwari minyaka yonke.
Esi siko sibhiyozelwa eUnited States naseCanada. IGroundhog Day, ebizwa ngokuba yiGroundhog Day ngesiNgesi, lisiko elidumileyo. NgoFebruwari 2, bonke abantu baseMelika babelindele ngolangazelelo isiprofeto sikaPhil the Groundhog. Nangona kunjalo, abantu abaninzi kulo mmandla banezabo iimarmots ukuze benze uqikelelo lwabo oluthile.
Ngokuqinisekileyo ekupheleni kwesi sithuba uya kuzibuza ukuba ngaba zinyanisile na. Okothusayo kukuba, Uqikelelo lunokuchaneka okuphakathi kwama-75% nama-90%. Ngale ndlela sinokuqiniseka ukuba, kwiimeko ezininzi, izithethe ezidumileyo zinokusebenza njengesalathiso sokujonga ukuba lingakanani ixesha esilishiyele ukuphelisa ubusika.
usuku lwe-canadian groundhog
Kukho iimarmots ezininzi ezidumileyo eCanada: UBrandon Bob, uGary the Groundhog, uBalzac Billy kunye noWiarton Willie, nangona iNova Scotian San kuthiwa inelona xilongo liphezulu.
Nokuba kunjalo, kukho iibhendi, iibhanile, ukutya, kunye nolonwabo kuyo yonke imibhiyozo. Kudala ndilindele ukuba uqikelelo lwalo nyaka luyakuba yintoni na.
Usuku lweGroundhog ePenxutonne, ePennsylvania
Nangona ilizwe ngalinye elibhiyozela usuku lune-groundhog yalo, enye yeendawo ezinenani elikhulu labathathi-nxaxheba yiPunxsutawney (Pennsylvania), isiko eliye lagcinwa ukususela ngo-1887, abaqwalasela i-Punxsutawney Phil Just groundhog apha ngokusemthethweni.
Abantu abaninzi bahamba besuka kwimimandla eyahlukeneyo ukuba bathathe inxaxheba kwimisitho yoSuku lweGroundhog ehlelwe yiPunxsutawney Groundhog Club. Ngaloo mini rhoqo abantu abanxibe i-tuxedos kunye neminqwazi ephezulu babonwa besonwabela umsitho phakathi komculo kunye nokutya.
Rhoqo nge-2 kaFebruwari, iintatheli, abakhenkethi kunye namalungu eklabhu bayahlangana ukuze balinde uPhil ukuba abonise kwaye anike uqikelelo lwemozulu.
I-groundhog kuthiwa yathatha igama layo ngokuhlonipha uKumkani uPhilip, uDuke wase-Edinburgh, kwaye nokuba yinyani okanye akunjalo, ishiya ikhaya layo e-Gobbler's Knob kwindawo esemaphandleni kufuphi nesixeko. nyaka ngoFebruwari 2 ukulumkisa ngesithunzi sakho ukuba imozulu iya kuba njani.
Ukuba uPhil ubuyela emqolombeni xa ebona izithunzi, enye iiveki ezintandathu zasebusika. Kwelinye icala, ukuba awukwazi ukuyibona, intwasahlobo iya kufika.
UPhil waziwa kakhulu ngomboniso bhanyabhanya ka-1993 obizwa ngokuba yi-Groundhog Day, eyakhokelela ekubonakaleni kukaGroundhog kwi-Oprah's Show ngo-1995. Ukwafakwe kwindima yochungechunge lweMTV.
Isidima sakhe sakhula kakhulu kangangokuba ngo-2013, umtshutshisi wase-Ohio wade wammangalela “ngokumela kakubi kwasentwasahlobo,” efuna isigwebo sentambo, kwaye kwakhutshwa iziqinisekiso ezimbini zokubamba uqikelelo lobuxoki (2015 kunye no-2018).
Kuya kuba mnandi ukukwazi ukuzimasa enye yale misitho kwaye uyibone bukhoma, kodwa kuba ingenguye wonke umntu onokuyenza, kuya kufuneka size nento: shicilela ibali likaPhil, bukela imovie emele okanye unike nje iindaba ezimnandi zemini yomhlaba.
Njengoko ubona, i-Groundhog Day inemvelaphi kunye nokubaluleka kwayo kwixesha elidlulileyo nanamhlanje. Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga noSuku lweGroundhog, ziphi iimpawu zayo, kubaluleke kangakanani kwaye lubhiyozelwa njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » ngokubanzi » Izaziso » Usuku lwegroundhog